<<first <prev 123 (4)5678910 next> last>>
Posted By - Ko Ko - April 25, 2012
အစားမက်နေတဲ့ Sistar အဖွဲ့
SISTAR အဖွဲ. က တခြား မိန်းကလေး အဖွဲ. များနှင့် ယှဉ်လျှင် သူမ တို.ဟာ ပိန်တယ်လို. မထင် ရကြောင်း ငြင်းချက်ထုတ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းနဲ့ ညစာ အများကြီး မစား ခြင်းတို.ဖြင့် သူမတို.ရဲ့ Body Sahpe ကို ထိန်းထား ခဲ့ကြ တယ်လို. ရှင်းပြ ခဲ့ကြ ပါတယ်။
April 22 ရက်နေ့ ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာ မှာ စားပွဲ အပြည့် အသင့်စား အစား အသောက် တွေကို ပလုတ် ပလောင်း စားနေ ပုံက ပျံ.နှံ. နေခဲ့ ပါတယ်။ SISTAR စားနေတာ မုန်တိုင်း ၀င်နေ သလို ဘဲတဲ့၊ ပရိတ်သတ် တွေက မှတ်ချက် ချကြ ပါတယ်။
ပုံထဲမှာ မြင်တွေ. ရတဲ့ အတိုင်း SBS broadcasting Station နောက်ဘက် မှာ သူမတို. အဖွဲ.ဟာ အစား အသောက် များကို ပလုတ် ပလောင်း စားရင်း၊ ဓာတ်ပုံ ရိုက်တာ ကို မလှမှာ စိုးရိမ်စွာ အသဲ အသန် မြိုချ နေကြ ပါတယ်။
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူမတို. ရဲ့ ပရိတ်သတ်များ ကတော့ ဒီလို မှတ်ချက် ပေးကြ ပါတယ်။ "ချစ်ဖို. ကောင်း လိုက်တာ မင်းတို. အသီး အနှံ ချည်းဘဲ အမြဲ စားလို. ဘယ်ဖြစ် မလဲ၊ ဒီလိုမြင် ရတာ Diet Food တွေကို စားနေ တာကို မြင်ရ တာထက် ပိုကြည့် ကောင်းတယ်"
လက်ရှိမှာ တော့ SISTAR အဖွဲ.ရဲ့ ALONE album က Billboard K-POP Music Chart, April ပထမ အပတ်မှာ နံပါတ် ၁ ကို ရောက် ရှိနေ ပါတယ်။ သူမတို. ရဲ့ ALONE music video ကို ကြည့် သူပေါင်း ကလဲ ၄သန်း ကျော်သွား ပြီလို. သိရှိရ ပါတယ်။
Tags: korean singer | korean news | korea
Summary - We reported before that SISTAR had stated that they believe that they are not thin compared to other girl groups. SISTAR also chose exercising and not eating late night snacks as their methods for staying in shape. But what is going on. They were shown eating instant food. On April 22, an internet community board hadapost with the picture, [SISTAR, Eating Food LikeaFurious Storm]. In the picture, SISTAR is shown eating atatable in the mini-store for the SBS broadcasting station. The members still manage to look cute as they chow down on their food with mouths open wide. Netizens have stated, [Cute Cute - You can-t live off of only fruit], [This shows their human charm], and [It looks better than if they were eating dieting foods]. Currently SISTAR-s [Alone] reached Number1 on the Billboard K-Pop music chart in the first week of April. The official [Alone] music video currently has over4million views.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/519/sistar-pigs-out-on-burgers-and-ramen
YoonA Sullen Expression On - Love Rain - Sparks Buzz Among Fans
Posted By - Ko Ko - April 24, 2012
YoonA’s sullen expression on
‘Love Rain’ sparks buzz among fans
April 21 ရက်နေ့မှာ Yoon A (Girl Generation) ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားတဲ့ Love Rain ဇာတ်ကား မှ ရိုက်ကူရေး အခန်း တချို့ကို အင်တာနက် စာမျက်နှာ မှာဖြန့် ဝေခဲ့ ပါတယ်။
Jung Hana အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ YoonA အနေနဲ့ သူမရဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်းပြီး fresh ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှု ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ပရိတ်သတ် ထံမှ အချစ် များစွာကို ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
Fan အချို. ကတော့ သူမဟာ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင် Seo Joon ( မင်းသား Jang Geun Suk) ရဲ့ အနိုင်ကျင့် လှည့်စားမှု တွေကို ခံစားရတဲ့ ပုံစံ သရုပ်ဆောင် ရတာတောင် ချစ်စရာ ကောင်းတုန်း ပါဘဲတဲ့။
ဒါကြောင့် သူမရဲ့ fan တွေက သူမကို ချစ်စနိုး နဲ့ Pouting Hana လို့ ခေါ်ကြ ပါတယ်။
အချို. ကတော့ Love Rain ထဲမှ သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင် ဇာတ်ကောင် ဟာ အပြင်လော ကမှ Yoon A အစစ် လိုဘဲ လန်းဆန်း ချစ်စရာကောင်း ပြီးထင်ရှား တောက်ပ နေပါ တယ်တဲ့။
သူမ အတွက် အခုလို Drama ဇာတ်ကား အရှည်ကြီး ကို ရိုက်ကူး ရတာ လွယ်ကူ တဲ့ အလုပ် မဟုတ် ပေမယ့် သူမ ကတော့ တောက်ပတဲ့ အပြုံးကို အမြဲ ဆင်မြန်း ထားပါ တယ်တဲ့။ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေ ကလည်း သူမနဲ့ အလုပ်တွဲ လုပ်ရတာ အဆင်ပြေ ပါတယ်တဲ့။
အရင် တပတ်မှာ ပြသသွား တဲ့ ကြော်ငြာ အရ၊ လာမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်မှာ သူမနဲ့ မင်းသား Jang Geun Suk တို့ရဲ့ Kiss Scene ကို ပရိတ်သတ် များက ရင်ခုန်စွာ စောင့်စား နေကြ ပါသတဲ့။
ထုတ်လုပ်ရေး အနေနဲ့ လောလောဆယ် ပရိတ်သတ် များ အလွမ်းပြေ ကြည့်ရှု နိုင်ရန် ဇာတ်လမ်း နောက်ကွယ် မှ ရိုက်ကူးရေး အတွေ့ အကြုံများ ကို အင်တာနက် မှာ တင်လိုက် ပါပြီတဲ့။
Tags: korean actress | korean news | korea
Summary - On April 21st, behind still cuts of YoonA from KBS [Love Rain] was revealed to the public. YoonA, who plays as Jung Hana,has been receiving much love from viewers for her fresh and cute image in the series. The still cuts above showcase various emotions, displayed by the actress in her scenes. What caught the most interest of fans, however, was her sullen expressions when being irritated by Seo Joon (played by Jang Geun Suk). After seeing the still cuts, fans have createdanickname for YoonA called, [Pouting Hana]. One representative from the series shared, Hana, who showsalively and fresh image, is actually similar to the real YoonA, who brightens the mood on the set with her cheerful attitude. It must be difficult for her to film these never ending shootings, but she is still able to showabright smile. There arealot of compliments about her from the staff. In related news, the last preview promisedakiss scene between YoonA and Jang Geun Suk which has many fans anticipating the next episode. The PDs also recently released behind-the-scenes clips of the show for fans enjoyment, check it out.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/518/yoona-sullen-expression-on-love-rain-sparks-buzz-among-fans
Lee Byung Hun Individual Poster For G.I. Joe2Revealed
G.I Joe2ပိုစတာသစ်
Lee Byung Hun’s individual poster for ‘G.I. Joe 2' revealed
ဒီနှစ် summer မှာ ပွဲဦးထွက် ပြသမယ့် "G.I Joe 2" ဇာတ်ကား အတွက် ပိုစတာ တွေ စတင် ဖြန့်ချီခဲ့ ပါတယ်။ ကိုရီးယား နာမည်ကြီး မင်းသား လီဗြောင်ဟွန်း (Lee Byung Hun) ရဲ့ Strom Shadow စရိုက်နဲ့ ပိုစတာ ကလည်း တခု အပါ အ၀င် ပါဘဲ။
ဒီပိုစတာကို official home page မှာ တင်ပြီးတဲ့ နောက်၊ ပရိတ်သတ် တွေက မင်းသားရဲ့ တောင့်တင်းတဲ့ body ကို သဘောကျ ကြတာ အသေ အချာ ပါဘဲ။
ဒီ ဇာတ်ကား မှာ ဟောလီးဝုဒ် အကျော်အမော် Bruce Willis, Channing Tatum, Dwayne Johnson တို.နဲ့အတူ မင်းသား Lee Byung Hun က ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားပါတယ်။ ဇာတ်ကား ထုတ်လွှင့်မယ့် ရက်ကတော့ June 29th မှာ U.S နဲ့ June 21st မှာ korea တို. ဖြစ်ပါတယ်။
အခု လောလောဆယ် တော့ ဒီရုပ်ရှင် ကားရဲ့ ပိုစတာတွေ အများကြီး အင်တာနက် ပေါ်မှာ တင်ပြီးပြီ ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတို. ရှာဖွေ ကြည့်ရှု နိုင်ကြ ပါပြီ။
Tags: korean actor | korean news| korea
Summary - Gearing up for its summer release, G.I. Joe2has unveiled individual posters for the main characters of the movie. One of those posters features Korea-s star actor, Lee Byung Hun, as the character Storm Shadow. The poster was revealed through the official movie homepage, and is sure to captivate fans with Lee Byung Hun-s intense gaze and built body. The movie will feature other top Hollywood actors such as Bruce Willis, Channing Tatum, and Dwayne Johnson as main characters alongside Lee Byung Hun, and is scheduled for release on June 29th in the U.S. and June 21st in Korea. It has been reported thatadifferent set of posters will be released for Korea, so stay tuned.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/517/lee-byung-hun-individual-poster-for-gi-joe-2-revealed
Shinhwa's Eric And Miss A's Suzy Became A Couple For The Newest Episode Of 'Invincible Youth 2'
Posted By - Ko Ko - April 23, 2012
Shinhwa's Eric and miss A's Suzy becameacouple in 'Invincible Youth'
Eric နှင် Suzi တို့ 'Invincible Youth'
Shinhwa's Eric and miss A's Suzy became
a couple for the newest episode of 'Invincible Youth'
April 21 ရက်နေ့မှာ ပြသ သွားတဲ့ Invincible Youth2အစီ အစဉ် မှာ Suzi (Miss A) နဲ့ Eric (Shinhwa) တို.က စုံတွဲ အဖြစ် ပါဝင် တင်ဆက် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Eric က Suzi ကို ရွေးချယ်ပြီး တဲ့အခါ မှာ သူမရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ကို မဖုံးကွယ် နိုင်ခဲ့ ပါဘူးတဲ့။ အရင်အပတ် အစီ အစဉ် မှာ သူမ ဖိတ်ချင် တဲ့ ဧည့်သည် က Shinhwa အဖွဲ့ ပါလို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။
Shinwa အဖွဲ့ အနေနဲ့ G6 ကောင်မလေး တွေ စားထား တဲ့ ပန်းသီး တပိုင်း တစကို ကြည့်ရင်း၊ သူတို့နဲ့ အစီ အစဉ်မှာ စုံတွဲ အနေနဲ့ ပါဝင် တင်ဆက် ရမယ့် ကောင်မလေး တွေကို ရွေးချယ် ကြပါတယ်။
ပန်းသီး တွေပေါ်မှာ တချို့က တစ်ကိုက်စာ ဘဲ ကိုက်ထား တယ်၊ တချို့ ကတော့ အကုန်စား ပစ်ပြီး အစေ့ လောက်ဘဲ ချန်ထား တယ်၊ တချို့က ပန်းသီး ပေါ်မှာ အသဲပုံ အရာလေး ဖော်ထား တယ်၊ ဒီလို ပုံစံစုံ နေတဲ့ ပန်းသီး တွေကြားမှာ Eric က Suzi ကိုက်ထားတဲ့ ပန်းသီးကို ရွေးချယ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထို ၂ ယောက်က တခြား စုံတွဲ တွေထက် ပိုပြီး အလိုက်ဖက် ဆုံး ဖြစ်တယ် လို့ Invincible youth2ပရိတ်သတ် အချို့က ဆိုကြ ပါတယ်။ သူတို့ ပေးထား တဲ့ comment တွေက လည်း အစုံပါဘဲ။
ကဲ.. Suzi နဲ့ Eric တို့ရဲ့ ပရိတ်သတ် တွေလဲ စိတ်ဝင် စားရင် KBS ထုတ်လွှင့်တဲ့ Invincibl Youth 2, Episode 20 ကို စောင့်ကြည့် ကြဖို့ မမေ့နဲ့နော့်။
Tags: korean actor | korean actress | korean drama | korean news | korea
Summary - On the April 21st episode, Shinhwa emerged on set, surprising the G6 girls. Out of the girls, Suzy especially could not hide her excitement as she had picked Shinhwa on the previous episode as the guest she like to have on the show. After the appearance of the legendary idol group, the members of Shinhwa and G6 paired up as couples throughaunique game. The G6 members bit into apples in ways that they felt represented their individuality. The members of Shinhwa then selected the apple that appealed to them, and became partnered up with the members corresponding to the apples. Out of the various apples, including one with teeth markings, one with nothing left but seeds, and one bitten into the shape ofaheart, Eric chose one that turned out to belong to Suzy. The two made suchacute couple that other members could not help but comment, You guys look really good together. It-sagood thing you guys met. Catch more of the two on the latest episode of [Invincible Youth 2].
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/516/shinhwas-eric-and-miss-as-suzy-became-a-couple-for-the-newest-episode-of-invincible-youth-2
Bora Of SISTAR, Lovingly Autographs Each
Posted By - Ko Ko - April 22, 2012
SISTAR’s Bora lovingly autographs each ‘Alone’ CD
စီဒီတိုင်းကို ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်
Bora (sistar) lovingly autographs each 'Alone' CD
Sistar (Bora) က သူမတို.အဖွဲ.ရဲ့ ALBUM အသစ် ALONE CD ချပ်တွေမှာ ၀ယ်ယူသူ ပရိတ်သတ်များ အတွက် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ် ရေးထိုး ပေးနေ ပါတယ်တဲ့။ ပရိတ်သတ် အချို. ထင်ကြေးပေး နေကြတာ က သူတို. လက်မှတ် တွေကို ကော်ပီ ကူးပြီး ရောင်းမယ်လို. ထင်နေကြ ပါတယ်။ အခုလို သူမကိုယ်တိုင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်မှတ်ထိုး နေတော့ ၀ယ်ယူထား ကြတဲ့ ပရိတ်သတ် တွေအတွက် ပျော်စရာဘဲပေါ့။
နောက်တစ်နေ့ M Countdown အစီ အစဉ်မှာ သူမတို.အဖွဲ့ရဲ့ လက်မှတ်နဲ့ CD ခွေတွေ ရရင် ရနိုင်ပါတယ်တဲ့လေ။
ကိုရီးယား ပြေးပြီး M Countdown သွားကြည့် ချင်လာပြီ။
Summary - Look she is signing CDs on the floor. This is what I like about SISTAR they always put 100 percent effort on whatever they do! They are coming to Mcountdown tomrrow and hopefully we gonna get some autographed CDs for u guys. More fun event to come. Stay tuned.
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/515/bora-of-sistar-lovingly-autographs-each
Rendering time 0.0077 sec **
3262430fa4fcf60c74fdf3f58a8c0e75 - January 22, 2018 - 2:06:19 am